Opportunité hoantsika ny fahantrana: Itsika samy itsika ihany dia afaka mamorona asa - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
Tato ato aho dia miresaka foana ity asa ity aho satria betsaka ianareo no mandefa message aty amiko hoe inona no mba azo atao any fa tsy misy kandra. Oui, tena ady be hoantsika eto mihitsy io resaka asa io. Sarotra ny mahita asa hany ka ny mpampiasa koa aza indraindray manararaotra izany situation izany amin’ny fandatsahana ny karama ambany be: vao miala eo enao dia folo no mangataka hiditra amin’io toerana io. Zaran’ny olona aza ianao miala mba hiasany koa ihihihi. Mampiomehy sy mampalahelo. Otran’ireny sipa miseho manja be ireny zany kou hoe : 1 lasa dia 10 no te hisolo toerana.
Fahantrana noforonina no eto amintsika: tsy voatery hanaraka ny hevitro nareo
Io fahantrantsika io foana no dradraina etsy sy eroa, any amin’ny haino aman-jery, internet sy ny sisa: 5eme le plus pauvre Madagascar. Dia kivy tokoa itsika maheno izany fa hoe mahantra dia tsy hotafavoaka mihitsy zany, tsisy espoir mihitsy zany dago fa manao ze ivelomany fotsiny ny tsirairay avy. Non!! Nampahantraina itsika fa tsy mahantra. Ny toe-tsaintsika nampahantraina, mba ahafahantsika tsy mikaroka intsony fa miandry fanampiana avy any ivelany: « ka zay mahantra kou ». Novolena toe-tsaina negatif itsika mba hiamahantra foana. Ny haino aman-jery sy ny gazety ireny no anisany mizarazara izany toe-tsaina negatif izany. Rehefa tsy milamina ny sain’olona iray, tsy milamina ny tany dia tsy afaka mi-concentré amin’ny fampivoarana ny tenany sy ny ankohonany. Mivoaka ny trano dia mitebiteby foana. Ka izay tsy filaminan-tsaina izay no misintona ireny zavatra ratsy be dia be miseho amin’ny fiaianana andavanandro ireny. Ny mampalahelo anefa dia feno ny mijery ireny lohatenim-baovao amin’ny gazety ireny dia aveo mamoaka 400 ar hividiananazy. Ka bizina letsy zany ry Volagno Aminazy dia atao ze titre isontomana ny olona. Ok, je respecte.
Opportunité hoantsika ny fahantrana
Kivy itsika fa satria mahantra, kivy itsika satria firenena an-dalam-pandrosoana foana itsika. De lasa an-dalam-pihemorana. Kivy itsika fa na dia te hanao projet aza tsy manam-bola entina amatsian’azy. Na ny any hoanina aza ity manahirana. Kivy itsika satria mitombo ny tsy an’asa. kivy itsika fa satria tsy milamina ny tany: ny asan-dahalo sy ny politika. Kivy itsika satria sans espoir. Be dia be no mahakivy antsika ka miandry ny rariny sy ny hitsiny eto fa efa izao no anjara sy lahatra. Fa inona moa izany no tena mampahantra antsika???? Ny « TOE-TSAINA », eny ny toe-tsaina no tena mampahantra antsika satria toe-tsaina negatif no ananan-tsika. Vao hanao zavatra iray dia côté negatif no jerena: hamisavisana ny ratsy no hotongavan’ny tsara. Tsia hamisavisana ny ratsy no hotongavan’ny ratsy. Vao misy olona miresaka amintsika dia ny halemeny no omen-danja kokoa noho ny hatsarana ananany. Mitady asa itsika ka vao miala an-trano dia efa mamisavisa ny ratsy sahady: « andeha hoany fotsiny aho fa any mahita azy », na koa hoe » zah ne efa aiko fa tsy voaray ao ka ataotaoko any foana ity »…
Vahaolana: Fahantrana = motivation
Ny olona farany nijaly tany amin’ny ray aman-dreniny no matetika tafa amin’ny fiainana, ny olona tena nijaly tamin’ny fiainana no matetika lasa mpanakarem-be fa satria ny fijaliana niaiany no nataony motivation hirosoany amin’ny tsaratsara kokoa. Tsy te hiaina amin’ny fijaliana mahazo azy intsony izy dia miezaka mafy mba hotafa ka na inona na inona no zava-misy aminy eo dia tsy ataony mahakivy azy izany fa ny tanjony dia ny hoe : « zaho tsy maintsy tafa amin’ny fiainana ». Rehefa ny olona manana izay toe-tsaina izay hoe tsy maintsy tafa izay dia mazava hoazy ny fandreseny, mazava hoazy fa resiny ny fahantrana dia miana milamina izy sy ny ankohonany ary ny fianakaviany. Possible tsara ny miala amin’io fijaliana mahazo anao io, ovay ny toe-tsaina: manana toe-tsaina Positif. Raha ohatra ka tsy zakanao ny mamehy tena mijery jvtr negatif ao amin’ny télé ao de amidio any. Dia io fijaliana mahazo anao io ataovy motivation hirosoanao amin’ny tsaratsara kokoa. Aza kivy mihitsy na inona miseho eo, ataovy ao an-tsaina foana hoe, toatra hiakarana fotsiny ito fa zaho tsy maintsy tafa. Ary farany mahaiza mikarokaroka.
Mamorona asa fa aza miandry entretien lava tsy fantatra hivaly zao foana
Mbola resa-be koa ity resaka famoronana asa ity fa ny toro-hevitro aminareo rehefa amorona asa hoan’ny tena dia jereo foana ny cible-nareo. Io ve ny besoin n client nareo??? Ny eto amintsika izao lasa mihakamo ny olona dia raha mieritreritra kely ianao dia efa misy karazan’asa miforona hoazy izany afa tsy hiresaka ny fiaianana andavanandro tsika fotsiny aho: Livraison à domicile. Efa kamo ny olona se deplacer @ zao dia eo ianao tokony hamorona asa zao. Ohatra livraison à domicile: laoka, charbon, fanafody, kozakoza ilaina amin’ny fiainana andavanan-dro, epicerie en ligne…Na ianao izany manangana entreprise manao livraison, entreprise mandeha miatsena hoan’ny olona kamo, na koa ny zavatra amidinao io efa misy livreur daholo dia misy comission azo amin’iny.
Rehefa feno livreur daholo ity karazan’asa eto amintsika ity dia mihena ny fotoana lanintsika ivezivezena hiatsenana ahafahana manao zavatra hafa ampitomboina ny fidiram-bola. Ny livreur asa miforona hoazy ao anatiny izany. Epicerie efa reserver mialoha ny entana ao aminy dia ny livraison fotsiny no sisa…
Tsy holany eto ny zavatra horesahako fa fintiniko fotsiny. Ny fahantrana aza atao excuse tsy hietsehana, tsy hitadiavana fa ataovy motivation ahatafita amin’ny fiainana. Mamorona asa fa aza miandry ny vahiny foana no hanangana eto amintsika vao manana asa ianao. Zavatra farany zay kely amin’ny voalohany mety am-panakarem-be anao raha ohatra miezaka ianao. Eo ihany koa ny facebook sy ny tel manamora ny fifandraisan-tsika.